वडाध्यक्ष हुनु त प्रताप तामाङ जस्तो, कोरियाबाट मृत शव ल्याउन सहयोग गरे १ लाख १ हजार नगद — Himali Sanchar
माेरङकाे सुनवर्सी नगरपालिका वडा नं. २ का नगेन्द्रबहादुर विष्टको छाेरा सन्तोष विष्ट राेजगारीकाे सिलसिलामा कोरिया गएको डेढ वर्ष नपुग्दै उनको सडक दुर्घटनामा परी मृत्यु भएकाे छ । सुनवर्सी २ अमरदह बजार यतिबेला शोकमा डुवेको छ ।
सुन्दर भविष्य निर्माणको कल्पना गरेर बिबाह गरेको केही महिनामा बिदेश हानिएका २९ वर्षीय सन्तोष विष्टको गत जुलाई १२ मा सडक दुर्घटनामा परी मृत्यु भएको थियो ।
दक्षिण कोरियाको सिजिओ सहरमा स्कुटरमा सवार सन्तोषलाई पछाडिबाट गाडीले ठक्कर दिएपछि उपचारका क्रममा उनको मृत्यु भएको आफन्तको भनाई छ । दुर्घटना गराउने गाडी धनीको आर्थिक अवस्था अत्यन्तै कमजोर भएका कारण उनको शव नेपाल ल्याउन समस्या भएको स्थानीयले कोरियन दूतावासलाई उधृत गर्दै बताए । सन्तोषलाई दुर्घटना गराउने गाडीले चुक्ता गर्नुपर्ने रकम तिर्न नसकेपछि दुर्घटना गराउने गाडी धनी र शव त्यहाँको प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर राखेको छ ।
यता मृत्यू भएको २५ दिन भइसक्दा पनि शव नआउँदा ६० वर्षीय वावु नरेन्द्रबहादुर विष्ट , ५७ वर्षीय आमा चन्द्रमाया विष्ट र उनकी जीवन सङ्गीनी सरिता रोएर दिन बिताइरहनु भएको छ । शोकले उहाँहरूको भोक र निन्द्रा गुमिसकेको छ । नरेन्द्रले भन्नुभयो – १३ लाख ऋण गरेर गएको छोरो ऋण तिरी नसक्दै सधैंका लागि हामीलाई छोडेर गयो । न सास छ, न लास छ । ल्याउनका लागि सबैसँग गुहार मागें, तर कतैबाट पहल भएन । आखाँभरि आँशु पार्दै उहाँ भन्नुभयो – शब ल्याउन १० लाख खर्च लाग्छ भन्छन् , कहाँबाट ल्याउँ त्यति धेरै पैसा ?
सन्तोष दलालमार्फत दुवईबाट डेढ वर्ष अघि दक्षिण कोरिया पुगेका हुन् । पर्यटन भिषाबाट कोरिया पुगेका कारण सन्तोषको शव ल्याउन प्राविधिक समस्या भएको जानकारहरूको भनाई छ । यसैबीच सुनवर्सी २ का वडाध्यक्ष प्रताप तामाङले सन्तोष विष्टको शव ल्याउन शुक्रबार घरमै पुगेर विष्ट परिवारलाई १ लाख १ हजार नगद रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ ।
उहाँले सहयोग गर्दै आफ्नो वडाको वासिन्दालाई सङ्कटमा पर्दा जनप्रतिनिधिको हैषियतले ब्यक्तिगत रुपमा नगद सहयोग गरेको बताउनु भयो । गाउँको आशलाग्दो युवाको असामयिक निधन प्रति दुख प्रकट गर्दै तामाङले भन्नुभयो – म उहाँहरूको साथमा छु । बोल्दा बोल्दै भक्कानिनु भएका तामाङले बीच मै मन्तब्य टुङ्ग्याउनु भएको थियो ।
शव ल्याउन झण्डै १० लाख खर्च हुने भएपछि अहिले स्थानीयहरू सन्तोषको शव ल्याउने खर्च र प्रशासनिक प्रक्रिया मिलाउन लागेका छन् । वडाध्यक्ष तामाङ नेपाली काग्रेसबाट निर्वाचित भएका थिए।